Ndụmọdụ nke De Semalt Sobre La Planificación Y El Presupuesto De Su SEO
Aquellos na-enyere gị aka ịhọrọ njikwa Search engine na windo na-arụ ọrụ na-eme ka ọkpụkpụ. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme atụmatụ, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe. Dị ka ihe atụ, fallar en planear está planeando fallar.
N'elu SEO, a na-edepụta aha nke ọ bụla nke eziokwu, dị ka ọ na-agụnye nke ọ bụla, na-eme ka ọ dị mkpa. Mgbe ị na-aga SEO, a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ihe na-eme ka ha na-eme atụmatụ na ha na-eme ka ha. Gaa na onye ahịa, dị mkpa na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme atụmatụ.
Frank Abagnale, na ndị ọzọ na ndị ahịa nke Ọkachamara , bụ ndị na-eme ka a na-akpọ SEO.
Ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe ọ bụla na-adịghị mma
Ọ bụrụ na onye ahịa na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-akwado ihe dị ka nde $ 5,000, $ 3,000 bụ ihe dị mkpa nke onye ahịa nwere ike iji nweta SEO confiables de una empresa compikova.
Según Forbes, bụ ndị na-eme ihe nkiri na SEO. Dị ka ihe atụ, pagar a una empresa de SEO menos de $ 2.000 na-ejere servicios nke SEO zuru okè na ndị isi nke ndị ọzọ na-enweghị ihe ọ bụla..Dị ka ihe atụ, algunas de las subsecciones de SEO chọrọ $ 1000 maka serrado.
Ọ bụrụ na onye ahịa, ọ bụrụ na ọ bụrụ na onye ọ bụla nke SEO na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ $ 46.000 na-akwado ya, ọ ga-akwụ ụgwọ. Dị ka ihe nkiri a na-emekarị, na-eme ka ndị ahịa na-emekọ ihe banyere SEO na ndị ọkachamara na-egosi na a na-eme ka a na-emepụta ihe.
Ọ bụrụ na ị na-ele anya na SEO para trabajar con, por supuesto, muchos eziokwuores dị na juego. Ọ bụrụ na ị na-eleba anya na ụlọ ọrụ, ị ga-enwe ike inweta ihe niile zuru ezu ma ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ banyere SEO na Semalt nwa, ị na-eme ihe ndị a na-emepụta ihe ndị dị mkpa: ị na-eme ka onye ọ bụla na-eme ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-eme, ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ị na-enwe obi ụtọ.
¿Alguna vez nwere pensado cuál es el tiempo chọrọ ị ga-enye gị ohere ka Search Engine Optimization funcione? Dị ka ọ dị, site na 6 a 12 hacer na SEO na brinde resultsados ​​sostenibles, donde el período de 4 a 6 meses eficiente para obtener resultados mínimos. Durante los dos primeros meses, hay una pequeña posibilidad de alcanzar resultsados ​​esenciales.
Durante los dos primeros meses la mayor parte del tiempo debe dedicarse a la realización de la auditoría técnica SEO na atụmatụ nke progresos futuros. A na-elekwasị anya n'ụlọ ọrụ nke SEO na nke mbụ, na-emekarị nke ikpeazụ ikpeazụ nke ozi ọma, na-eme ka ndị na-ahụ anya.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe n'ezie na-eme ka a na-ahụ anya, cuando los propietarios del sitio comienzan a obtener pagos increíbles. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme atụmatụ ma ọ bụ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga n'ihu na-eme ka ihe ọ bụla nke SEO site na ha:
Na-atụ anya ihe dị mkpa bụ ihe ọ bụla dị mkpa na SEO. Ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ihe na-eme ka a na-eme ihe banyere SEO, ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-elekwasị anya na-eme ka ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ dị elu. Na SEO, centrandose en las ventas, los plomos, y el tráfico es más eficaz que prestando la mayoría de la atención a graduas.
b) Ngwá agha mgbochi
N'ikpeazụ, ọ bụ SEO, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa n'ezie..N'ezie, inweta a na-emepụta ihe omume nke ụlọ ahịa nke afọ 30% nke a na-ebipụta ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme 2 afọ na-eme ka ọ bụrụ otu. Sigue trabajando hacia tu objectivo para lograr los mejores resultados en SEO.
Ọ bụrụ na onye ọkachamara na SEO na-eme ihe ncheta na-eme ka ha na-eche echiche banyere windo 12 ọnwa, ¿cuánto estará dispuesto a pagar? Ọ bụrụ na ị na-eme ka ihe ọ bụla na-egosi na ọ bụ eziokwu,
Ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla. N'ihi na ọ bụ SEO, ọ dịghị ihe ọ bụla ga-eme ka ọ bụrụ na ọ na-egosi na ọ bụ ihe oyiyi.
e) Ibu ụzọ sus mejores capacidades
Na-eche banyere ihe ndị ọzọ banyere SEO na las posiciones isi y trabajar en ellos más en consecuencia. Ịchọpụta ihe dị iche iche nke SEO nwa los adịghị mkpa dị ka ihe ọ bụla dị mkpa iji chọpụta ihe zuru ezu nke ndị ọkachamara SEO, dị ka ihe dị iche iche na-eme ka ọ bụrụ na ị na-ahụ ya.
Despoes de haber contractado a su agencia de SEO, el trabajo en los siguientes pasos para establecer a largo plazo la cooperación fructífera.
1. Proporcione a su empresa de SEO con todos los detalles dị mkpa
Su empresa de SEO na-enyere gị aka ịchọta ha site web para hacer resultados rápidos. Ọ dịghị nke na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị mma.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ site na SEO, dejarlos manejar su sitio web para realizar sus tareas.
3. Ndị na-eme ihe banyere SEO y leerlos
Empresas de SEO completo nkerece na-akọwa sobre el estado de sus. Gaa na onye ahịa, nke a na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ ghara ịba ụba.
SEO na-eme ka a na-elekwasị anya na ihe dị iche iche na-eme ka a na-elekwasị anya na-eme ka a na-elekwasị anya na-eme ka a na-eme ka ọ dị mkpa. Na SEO, ọ bụrụ na ị na-enyere gị aka ịlụ, ya na pueden estar haciendo mal. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-enweta ihe ndị na-eme ka a na-emepụta pagos reales Source .